त्रिभुवन विमानस्थलमा यी युवकले सुटुक्क गर्दै थिए यस्तो काम, जब वास्तविकता थाहा भयो प्रहरीको समेत होस् उड्यो ! – Online Khabar 24
त्रिभुवन विमानस्थलमा यी युवकले सुटुक्क गर्दै थिए यस्तो काम, जब वास्तविकता थाहा भयो प्रहरीको समेत होस् उड्यो !
काठमाडौं । म’ल’द्वारमा लु’काएर सुन त’स्क’री ग’र्न खोज्ने एक जना भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको छ ।
बुधबार विहान साढे ९ बजेको फ्लाइटमा दुबईबाट आएका भारतीय नागरिक ३५ वर्षीय मोहमद जुहेदलाई प्रहरीले आधा किलो सुनसहित नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रहरी र भन्सारको संयोजनमा उनको म’ल’द्वार’बाट त’स्क’री ग’र्न ला’गि’एको सुन बाहिर निकालिएको हो ।
‘म’लद्वा’रमा लुकाएर ल्याएको रहेछ । भन्सार क्लियर गरेर बाहिर जाने बेला एराइभलको बाटोमा उनको चालढाल देखेर प्रहरीलाई शं’का लाग्यो । विमानस्थल सु’रक्षा कार्यालय प्रमुख एसएसपी राजेश बाँस्तोलाले भने – ‘शं’का लागेर चेकजाँच गर्दा फेला परेको हो ‘ । उनले आधा किलो (५४५ ग्राम) सुन लुकाएर ल्याएका हुन् । प्रहरीले उनको गतिविधि शं’का’स्पद देखेपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
दुबईबाट सुन लिएर आएको सुराकका आधारामा प्रहरीले ट्वा’इ’लेट गराएर जुहेवले म’ल’द्वा’रमा लु’का’एको आधाकिलो सुन ब’रा’मद ग’रे’को छ । उत्तर प्रदेशको बुलन्द शहर घर भएका जुबेदले एक्सरे मेशिनले रिड नगर्नेगरी जलप लगाएर सो सुन ल्याएका थिए । उनले नेपालमा कसको लागि सुन ल्याइदिएका थिए भन्ने खुलिसकेको छैन।
यो पनि, भोलिदेखि जनगणनाः सम्पूर्ण तयारी पूरा
हरेक १० वर्षमा सञ्चालन सञ्चालन गरिने राष्ट्रिय जनगणनाको १२औँ शृङ्खलाको मुख्य गणनाकार्य भोलि कात्तिक २५ गतेबाट सुरु हुँदैछ । यो गणना आगामी मङ्सिर ९ गतेसम्म जारी रहने र यसका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिइयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयाँलले हरेक दश वर्षको अन्तरालमा गरिने जनगणनाले राष्ट्रिय र स्थानीयस्तरमा आधारभूत जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क तयार गरी आवधिक विकास लक्ष्य तथा दिगो विकास लक्ष्यका अनुगमन र मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित सामाजिक, जनसाङ्ख्यिक र आर्थिक सूचकको लागिसमेत सूचना प्रदान गर्न सकिने बताउनुभयो । यो खबर साभार षरियको हो ।
Prevविमानस्थलमा दुबईबाट आएका एक ब्यक्तिले अनौठो व्यवहार देखाएर चेकजाँच गर्दा पुलीस पनि छक्क !
nextपेट्रोल, डिजेल, मट्टितेलको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो, एक लिटर पेट्रोलको मूल्य नै यति !